QM oo bil u qabtay dowlada Suudaanta Koonfureed in ay heshiis ku gaaraan… – Hagaag.com
QM oo bil u qabtay dowlada Suudaanta Koonfureed in ay heshiis ku gaaraan…
Qaramada Midoobay ayaa dowladda Suudaan-ta Koonfureed u qabtay bil iney ku gaarto heshiis ay dagaallada ku soo afjareyso haddii kale ay la kulmi doonto cunaqabateyn.
Golaha ammaanka ee Qaramda Midoobay ayaa wuxuu qaraar ka soo saaray Suudaan-ta Koonfureed qaraarkaasi oo digniin lagu siinayo dhinacyada isku haya dalkaasi iney heshiis nabadeed ku soo gaaraan haddii kale ay wajihi doonaan cunaqabateyno.
Wasiirka gaashaandhigga Suudaan-ta Koonfureed (Kuol Manyang Juk) iyo afar mas’uul oo kale ayaa la xayirayaa hantidooda waxaana lagu soo rogayaa cunaqabateyn dhinaca socdaalka ah haddii heshiis la gaari waayo.
Danjiraha Mareykanka u fadhiya Qaramada Midoobay, Nikki Haley waxay sheegtay Mareykanka oo dalka qaraarkan in la soo saaro dusha ka riixayey uu dulqaadku haatan ka dhammaaday.
Itoobiya oo ah waddanka wadahadallada nabada ee dowladda iyo kooxaha ka soo horjeeda marar badan marti gelisay ayaa ka mid ah waddamada lixda ah ee ka aamusay meel marinta qaraarka uu Golaha Ammaanku soo saaray.
Dagaallada sokeeye waxay Suudaan-ta Koonfureed ka qarxeen shan sana ka hor marki uu madaxweyne Salva Kiir uu xilka ka qaaday Madaxweyne ku xigeenkiisa Riek Machar.